Eng.Axmed Macalin Fiqi oo isku sharaxay madaxweynaha maamulka gobollada dhexe”Daawo Sawirro” – Radio Muqdisho
Munaasabad balaaran oo lagu qabtay hotelka Saxafi ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qeybgalay mas’uuliyiin katirsan qeybaha bulshada gaar ahaan odayaal,haween,dhalinyaro,aqoonyahan,mudanaayal baarlamaanka Soomaaliya katirsan iyo mas,uuliyiin xilal sare kasoo qabtay dowladihii dalka soo maray.
Xafladan oo aheyd mid si weyn loo abaabulay ayaa waxaa musharaxnimadiisa kusoo bandhigayay Eng.Axmed Macalin Fiqi oo horay usoo noqday taliyihii hay’adda nabadsugidda Soomaaliya iyo safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Sudan,isagoo muujinayay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada ee maamulka la doonayo in laga hirgeliyo gobollada Mudug iyo Galguduud ee bartamaha Soomaaliya.
Munaasabadan ayaa waxaa ugu horeyn ka ahdlay gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee beelaha Hawiye nabadoon Maxamed Xassan Xaad oo sheeegay in Eng.Axmed Fiqi uu yahay mas’uul horay loo tijaabiyay taasoo cadeyneysa sida loogu kalsoonyahay inuu horumariyo gobolladaas hadii uu ku guuleysto.
Xildhibaan Maxamed Cabdulle Faarax Geesey oo ku hadlayay magaca xubnihii baarlamanka ee xafaladda ka qeybagalay ayaa ku amaanay Amb.Fiqi wadaniyadda uu muujiyay intii uu hayay xilka agaasimaha nabadsugidda Soomaaliya.
C/waaxid Cilmi Goonjeex oo horay usoo noqday ku/xigeenka ra’isulwasaaraha Soomaaliya ayaa isaguna xusay in Eng.Amed Macalin Fiqi oo howlo badan usoo qabtay dadka Soomaaliyeed laga filan karo dar dar hor leh iyo qorshe cusub oo lagu samatabixiyo dadka ku nool Mudug,iyo Galguduud.
Ugu dambeyn munaasabdda ayaa waxaa khudbad dhinacyo badan taabaneysa kusoo xiray Eng.Axmed Macalin Fiqi oo ah musharaxa xilka madaxweyne ee maamulka gobollada dhexe ee Soomaaliya isagoo sheegay in hadii la doorto uu ka hirgelin doono halkaasi maamul ay ku mideysanyihiin dhamaan dadka dega gobolladaasi kaasoo horsed u noqon doona in waqti dhow isbedel lagaa dareemo.
Musharaxa madaxweynaha Eng.Axmed Macalin Fiqi ayaa ballan qaaday hadii uu ku guuleysto xilkaasi in muddo ku sinan hal sano uu deked sare u qaada wax soosaarka maamulka ka hirgelin doono gobollada uu haatan u sharaxanyahay inuu madaxweyne ka noqdo.
Cadaalad ku baahsan dhamaan deeganaada,la dagaalanka Argagaxisada iyo xoreynta deegaanada weli gacanta ugu jira,ciribtirka burcad badeeda,dhiirigelinta dadka naftooda u huray xoreynta deegaanka sida Ahlu suna waljameeca,u cadaalad falida dadka deegaanka iyo ka fogaanshaha.